Fankalazana ny faha-60 taonan'ny Tafika an-dranomasina | Primature
26 février 2021 30 mars 2021
Mahazoarivo, ny 26 febroary 2021- Nanome voninahitra ny lanonam-pankalazana ny faha-60 taonan’ny Tafika an-dranomasina sy ny fametrahana amim-pomba ofisily ny “Deuxième Bataillon d’Infanterie de Marine”, tao Antsiranana, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany.
“Fitaovana lehibe hametrahana ny hasim-pirenena sy ny fiandrianam-pirenena ny Tafika an-dranomasina”, hoy ny Praiminisitra ka mila averina ny hasiny. Amin’ny maha Nosy an’i Madagasikara dia mila arovana ny sisin-tany sy ny fari-dranomasina ka manana adidy sy andraikitra goavana amin’izany ny Tafika an-dranomasina.
Araka izany dia mitaky fomba fiasa sy rindran-damina vaovao, fa indrindra tokony mivonona mandrakariva amin’ ny fiatrehana ireo ambana rehetra misy ny eo anivon’ny Tafika an-dranomasina. Eo ny fiarovana ny harem-pirenena, na an-tanety izany, na amin’ny morontsiraka fa indrindra amin’ny fari-dranomasina, betsaka ireo jono tsy ara-dalàna saika manerana ny fari-dranomasin’I Madagasikara; toy izany koa ireo sambo mitatitra olona antsokosoko mifamezivezy amin’ireo Nosy rahavavy; eo ihany koa ny fanaraha-maso ireo lalana an-dranomasina misy eto amintsika. Ho fanatrarana ny tanjona anefa dia ilaina ny fanitsiana ny rafitra, ny fampitaovana ary ny fandaminana ny olom-belona.
Ankoatra izay, dia vahaolana ihany koa ny fametrahana paikady vaovao amin’ny fitantanana ny fari-dranomasina na “Stratégie de Sécurité Maritime”. Satria maro ireo departemanta mitrandraka ny fari-dranomasina, raha ny nambaran’ny Praiminisitra, ka ilaina ny fiaraha-miasa eo amin’izy ireny sy ny Tafika an-dranomasina ho an’ny tombotsoan’ny firenena. Hisy fanovana fomba fiasa, araka izany amin’ireo departemantan’ny ministera rehetra manana andraikitra an-dranomasina.
Tsy adinon’ny Lehiben’ny governemanta ny niarahaba ny tafika Malagasy amin’ireo dingana rehetra efa vita amin’ny fanovana rafitra, mbola maro anefa, hoy izy ireo dingana tsy maintsy hirosoana. Ho an’ny Tafika an-dranomasina manokana dia ho atsangana any amin’ny Faritra Atsimo izay lalana an-dranomasina voalohany eto Madagasikara ny toby ari-fomba, izay afaka mandray andraikitra avy hatrany raha vao misy trangana jono tsy ara-dalàna, izay mateti-piseho any amin’iny faritra iny.
Teo ampamaranana dia notsindrin’ny Praiminisitra fa ny fanovana rehetra atao eto amin’ny firenena dia mifototra amin’ny fitsinjaram-pahefana, izay foto-pisainana sy fomba amam-panao takian’izao vaninandro misy antsika izao.
← Fanombohana ny asa fanarenana ny fotodrafitrasa mitondra rano amin’ny lemak’i Mahavavy
Conseil du gouvernement du Mercredi 03 Mars 2021 →